Marina tsy misy asa - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Vakio ny Baiboly!
Imbetsaka i Paoly no nilaza fa ny Romana dia milaza fa tokony ho amin'i Kristy isika fa Andriamanitra dia mihevitra antsika ho marina. Na dia manota aza isika indraindray, ireo fahotana ireo dia isaina amin'ilay taloha niaraka nohomboana tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana; ny fahotantsika tsy miankina amin'ny toetrantsika ao amin'i Kristy. Adidintsika ny miady amin'ny ota - tsy ny ho voavonjy, fa satria efa zanak'Andriamanitra isika. Ao amin'ny tapany farany amin'ny toko faha-8, nitodika tany amin'ny hoavintsika be voninahitra i Paoly. Miandry antsika ny zavaboary rehetra Tsy mora ny fiainana kristianina. Tsy mora ny miady amin'ny ota. Tsy mora ny fanenjehana. Ny fiatrehana ny fiainana andavanandro eto amin'ity tontolo lavo miaraka amin'ny olona mety lo ity dia manasarotra antsika ny fiainana. Na izany aza, hoy i Paoly: "fa izao fotoan'ny fijaliana izao dia tsy mitombina amin'ny voninahitra haseho amintsika" (and. 18). Tahaka an'i Jesosy, eo koa ny fifaliana - ho avy izay ...
Fahasoavana madio tokoa no famonjena anao. Tsy misy azonao atao ho an'ny tenanao afa-tsy ny matoky izay omen'Andriamanitra anao. Tsy mendrika izany ianao tamin'ny fanaovana na inona na inona; satria tsy tian'Andriamanitra hisy hahalala ny zava-bitany teo alohany (Efesiana 2,8: 9–XNUMX GN). Fahafinaretana tokoa rehefa mianatra mahatakatra ny fahasoavana isika Kristiana! Io fahatakarana io dia manala ny tsindry sy adin-tsaina matetika apetratsika amin'ny tenantsika. Mahatonga antsika ho Kristiana milamina sy falifaly mijery ivelany fa tsy anaty. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia midika fa miankina amin'ny zavatra nataon'i Kristy ho antsika ny zava-drehetra fa tsy izay ataontsika na tsy azontsika atao ho an'ny tenantsika. Tsy afaka mahazo famonjena isika. Ny vaovao tsara dia ny tsy ahafahantsika mahazo azy io satria efa nataon'i Kristy izany. Ny hany ataontsika dia ny manaiky ny zavatra nataon'i Kristy ho antsika ary maneho fankasitrahana lehibe amin'izany. Nefa mila mitandrina ihany koa isika! Tsy azontsika atao ny mamela ny zava-poana miafina amin'ny ...
Ny fahasoavana no teny voalohany amin'ny anarantsika satria izy io dia mamaritra tsara indrindra ny diantsika manokana sy niombonantsika tamin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. "Fa kosa, mino isika fa hamonjy amin'ny fahasoavan'i Jesosy Tompo, tahaka azy ireo koa" (Asa. 15:11). Isika dia "marina nefa tsy misy fahamendrehana amin'ny fahasoavana amin'ny fanavotana izay tonga tamin'i Kristy Jesosy" (Rom 3:24). Amin'ny fahasoavana irery ihany no avelan'Andriamanitra (amin'ny alàlan'i Kristy) handray ny fahamarinany manokana. Mampianatra antsika tsy tapaka ny Baiboly fa ny hafatry ny finoana dia hafatra momba ny fahasoavan'Andriamanitra (Asa 14,3; 20,24; 20,32). Ny fototry ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona dia fahasoavana sy fahamarinana hatrany. Na dia fanehoana ireo soatoavina ireo aza ny lalàna, ny fahasoavan'Andriamanitra dia nahitana fitenenana feno tamin'ny alàlan'i Jesosy Kristy. Ny fahasoavan'Andriamanitra no hamonjeny antsika amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy irery ihany fa tsy amin'ny fitandremana ny lalàna. Ny lalàna izay manamelohana ny rehetra dia tsy tenin'Andriamanitra farany ho antsika. Ny teny farany nataony ho antsika dia ...
Fa maninona aho no velona Misy tanjona ve ny fiainako? Inona no hitranga amiko rehefa maty aho? Fanontaniana lehibe napetraky ny tsirairay tamin'ny tenany talohan'izay. Fanontaniana izay homenay anao ny valiny eto, valiny tokony haseho: Eny, misy dikany ny fiainana; eny, misy fiainana aorian'ny fahafatesana. Tsy misy azo antoka kokoa noho ny fahafatesana. Indray andro dia mahazo ilay vaovao mampatahotra isika fa maty ny havantsika iray. Mampahatsiahy antsika tampoka izany fa tsy maintsy ho faty rahampitso, amin'ny herintaona na amin'ny antsasaky ny taonjato iray koa isika. Ny tahotra ny ho faty no nanosika ny sasany tamin'ireo mpanongam-panjakana Ponce de Leon hitady ny loharanon'ny tanora malaza. Fa ny mpijinja dia tsy azo esorina. Tonga amin'ny olona rehetra ny fahafatesana. Olona maro izao no mametraka ny fanantenany amin'ny fanitarana sy fanatsarana ny fiainana siantifika sy teknika. Fihetseham-po toy inona moa raha toa ka nahomby ireo mpahay siansa nahita mekanisma biolojika mety hanemotra ny fahanterana na angamba hanakana azy mihitsy aza! Io no vaovao lehibe sy raisina am-pitiavana indrindra ...
Ny finoana kristiana dia manambara ny hafatra fa tonga ara-potoana ny Zanak'Andriamanitra tonga amin'ny toerana voatendry mialoha ary monina eo amintsika olombelona. Nanana toetra miavaka i Jesosy ka nisy ny nanontany mihitsy ny amin'ny maha olombelona azy. Ny Baiboly dia manamafy hatrany hatrany fa Andriamanitra amin'ny nofo - nateraky ny vehivavy - dia olombelona tokoa, izany hoe, ankoatry ny fahotantsika, dia tahaka antsika tamin'ny lafiny rehetra (Jaona 1,14:4,4; Gal 2,7: 2,17; Fil 25 ; He). Olombelona tokoa izy. Ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo dia matetika ankalazaina amin'ny Krismasy, na dia nanomboka tamin'ny fitondrana vohoka an'i Maria aza, araka ny kalandrie nentim-paharazana tamin'ny martsa, ny andro firavoravoana tamin'ny fanambarana (izay nantsoina koa taloha hoe ny Fetin'ny fahatongavan'ny nofo ho nofo na Andriamanitra tonga nofo). Kristy nohomboana tamin'ny hazo fijaliana Na dia zava-dehibe aza ny fitondrana vohoka sy ny fahaterahan'i Jesosy ho an'ny finoantsika, dia tsy eo amin'ny laharana voalohany amin'ny hafatry ny finoana izay entintsika manerantany. Rehefa nitory tany Korinto i Paoly dia nanambara ...
Ekena tsy misy fepetra isika
Na aiza na aiza eto amin'ity tontolo ity dia mila mahatratra zavatra isika. Eto amin'ity tontolo ity dia toy izao: «Manaova zavatra, dia mahazo zavatra ianao. Raha manao araka ny sitrako ianao dia ho tiako ». Hafa mihitsy amin'Andriamanitra. Tiany ny olon-drehetra, na dia tsy misy asehontsika aza fa hanakaiky ny fihaonana amin'ny fenitra feno sy feno azy. Nampihavaniny tamintsika tamin'ny alàlan'ny zavatra sarobidy indrindra eo amin'izao rehetra izao isika, tamin'ny alàlan'i Jesosy Kristy.
Fandikana Baiboly "Lotera 2017"
Raha noroahin'i Jehovah Andriamanitrao teo anoloanao izy ireo, dia aza manao anakampo hoe: Nentin'i Jehovah haka ity tany ity aho noho ny fahamarinako; fa efa noroahin'i Jehovah hiala eo anoloanao ireto firenena ireto noho ny ratsy fanaony. Fa tsy hiditra handrombaka ny taniny ianao noho ny fahamarinanao sy ny fonao marina; fa horoahin'i Jehovah Andriamanitrao ireto olona ireto noho ny faharatsiany mba hitandremany ny teny izay nianianany tamin'i Abrahama razanao. ary Isaka sy Jakoba. Koa ankehitriny fantaro fa tsy omen'i Jehovah Andriamanitrao anao ity tany soa ity noho ny fahamarinanao, satria firenena maditra ianao » (Nomery 5: 9,4-6).
«Ny mpampindram-bola iray dia nanana mpitrosa roa. Ny iray nitrosa groschen volafotsy dimanjato, ny iray dimam-polo. Nefa satria tsy afaka mandoa izy ireo dia nomeny azy mirahalahy. Iza amin'izy ireo no ho tia azy bebe kokoa? Simona namaly ka nanao hoe: Ataoko fa ilay nomeny bebe kokoa. Fa hoy izy taminy: Marina ny hevitrao. Ary nitodika tany amin-dravehivavy izy ary nanao tamin'i Simona hoe: Hitanao ve io vehivavy io? Tonga tao an-tranonao aho; tsy nanome rano ho an'ny tongotro ianao; fa nandena ny tongotro tamin'ny ranomasoko izy ary namaoka izany tamin'ny volon-dohany. Tsy nanoroka ahy ianao; Saingy tsy nitsahatra nanoroka ny tongotro izy hatramin'ny nidirako. Tsy nohosoranao diloilo ny lohako; fa izy kosa nanosotra diloilo fanosorana ny tongotro. Ary noho izany dia lazaiko aminao: Voavela ny helony be, satria be fitiavana izy; fa izay voavela heloka kely dia kely fitiavana. Ary hoy Jesosy taminy: Voavela ny helokao. Ary izay nipetraka teo ambony latabatra dia nanomboka ka niresaka hoe: Iza moa Ity no mamela ny fahotana? Ary hoy Izy tamin-dravehivavy: Ny finoanao no nahasitrana anao; mandehana soa aman-tsara! " (Lioka 7,41-50).
«Fa ny mpamory hetra rehetra sy ny mpanota nanatona azy hihaino azy. Fa ity zanako ity efa maty, fa velona indray; very izy fa hita indray. Ary nanomboka faly izy ireo » (Lioka 15,1: 24 sy).
“Fa nanao izao fanoharana izao tamin'ny sasany kosa izy, izay resy lahatra fa mpivavaka be sy manao izay mahitsy izy, nefa manao tsinontsinona ny sasany. Nijoro ilay Farisianina ka nivavaka tamin'ny tenany toy izao: misaotra anao aho Andriamanitra ô, fa tsy mba toy ny olon-kafa, mpanendaka, tsy marina, mpanitsakitsa-bady aho, na toa an'io mpamory hetra io aza. Mifady hanina indroa isan-kerinandro aho ary mandoa ny fahafolonkarena izay rehetra alaiko. Ilay mpamory hetra kosa nijanona teny lavitra, ary tsy te hanandratra ny masony ho any an-danitra, fa nikapoka ny tratrany ary nanao hoe: Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota! Lazaiko aminareo: Ilay nidina nody tany an-tranony no nohamarinina, fa tsy izy. Fa izay manandra-tena no haetry; ary na iza na iza manala-tena dia hasandratra » (Lioka 18,9-14).
«Ary niditra tao Jeriko izy ka namaky. Ary, indro, nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, lohan'ny mpamory hetra sady nanan-karena. Ary naniry hahita an'i Jesosy izy, nefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny vahoaka. fa kely volo izy. Ary nihazakazaka nialoha izy ka nananika aviavy hizaha azy; satria eo no tokony handalovany. Ary rehefa tonga teo Jesosy, dia niandrandra izy ka nanao taminy hoe: Ry Zakaiosy, midina faingana; satria tsy maintsy mijanona ao an-tranonao aho anio. Ary nidina faingana izy ary nandray azy tamim-pifaliana. Ary raha nahita izany izy rehetra, dia nimonomonona ka nanao hoe: Miverina amin'ny mpanota Izy. (Lioka 19,1-7).
“Marina izany, satria mandray izay sahaza antsika isika; fa ity kosa tsy nanao ratsy. Ary hoy izy: Jesosy ô, tsarovy aho rehefa tonga amin'ny fanjakanao ianao. Ary hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminao marina tokoa: Anio no hiarahanao amiko any Paradisa. (Lioka 23,41-43).
«Ary nony maraina koa dia niditra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy, dia nankeo aminy ny vahoaka rehetra, ary nipetraka nampianatra azy Izy. Ary ny mpanora-dalàna sy ny Farisisa nitondra vehivavy nanitsakitsa-bady, dia nametraka azy teo afovoany ka nanao taminy hoe: Tompoko, ity vehivavy ity tratry ny fijangajangana. Nasain'i Mosesy nitora-bato antsika ny vehivavy toy izany. Inona izany lazainao izany? Nefa hoy izy ireo mba hanandramana azy, mba hananany zavatra hitory azy. Fa Jesosy niondrika ary nanoratra tamin'ny tany tamin'ny tanany. Ary raha mbola nanery azy fatratra toy izao ireo, dia nipetraka izy ka nanao taminy hoe: Izay rehetra tsy manota eo aminareo, dia aoka hitora-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra tamin'ny tany. Ary rehefa nandre izany izy, dia nivoaka tsirairay, ny loholona aloha; ary Jesosy irery ihany no sisa teo nijanona niaraka tamin'ilay vehivavy nijanona teo afovoany. Dia nipetraka Jesosy ka nanao taminy hoe: Aiza ianao, Ravehivavy? Tsy nisy olona nanameloka anao ve? Fa hoy izy: Tsy misy, Tompoko. Fa hoy Jesosy: Izaho koa dia tsy manameloka anao. mandehana any ary aza manota intsony » (Jaona 8,1-11).
"Fa maninona ianao no manandrana an'Andriamanitra ankehitriny amin'ny fametrahanao zioga amin'ny vozon'ny mpianatra izay tsy zakan'ny razantsika na isika?" (Asan’ny Apostoly 15,10).
«Fa amin'ny asan'ny lalàna dia tsy misy olona ho marina eo alohany. Fa avy amin'ny lalàna ny fahalalana ny ota. Fa ankehitriny ny fahamarinana izay manan-kery eo anatrehan'Andriamanitra dia naseho tsy misy lalàna, porofoin'ny lalàna sy ny mpaminany » (Romana 3,20-21).
«Aiza izao ny fireharehana? Voahilika izy io. Amin'ny lalàna inona? Amin'ny lalàn'ny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàn'ny finoana. Koa mino izahay izao fa marina ny olona raha tsy misy ny asan'ny lalàna, amin'ny finoana irery ihany » (Romana 3,27-28).
Hoy isika: raha marina amin'ny asa i Abrahama dia afaka mirehareha izy nefa tsy eo imason'Andriamanitra. Satria inona no lazain'ny soratra masina? "Ary Abrahama nino an'Andriamanitra, ka nisaina ho fahamarinany izany." (Genesisy 1: 15,6) Saingy ho an'ireo izay miasa dia tsy ampiana ho azy ireo ny karama fa noho izy ireo. Fa izay tsy miasa kosa, nefa mino Izay manamarina ny meloka, dia isaina ho fahamarinana ny finoany. Tahaka an'i Davida koa nitso-drano olona, ​​izay nomen'Andriamanitra ny fahamarinana fa tsy manao asa » (Romana 4,2-6).
"Fa izay tsy hain'ny lalàna, satria nalemy nofo, dia nataon'Andriamanitra; nirahiny ny Zanany ho nofo, mpanota, noho ny ota sy nanameloka ny ota tamin'ny nofo" (Romana 8,3).
"Tsy avy amin'ny asa, fa amin'ny alàlan'ilay niantso - dia nilaza taminy hoe:" Ny zokiny hanompo ny zandriny. Fa maninona no izao? Satria tsy nitady fahamarinana noho ny finoana, fa toy ny avy amin'ny asa. Voadona ny vato misakana » (Romana 9,12: 32 sy).
“Fa raha avy amin'ny fahasoavana izany, dia tsy avy amin'ny asa; raha tsy izany dia tsy fahasoavana ny fahasoavana » (Romana 11,6).
"Fa satria fantatsika fa ny olona tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna, fa amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika, mba hohamarinina amin'ny finoana an'i Kristy isika fa tsy amin'ny asan'ny lalàna. ; satria tsy misy olona marina amin'ny asan'ny lalàna » (Galatiana 2,16).
"Izay manolotra ny Fanahy aminareo ankehitriny ka miasa toy izany eo aminareo, moa avy amin'ny asan'ny lalàna va, sa amin'ny fitoriana ny finoana?" (Galatiana 3,5).
«Ho an'ireo izay miaina amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana. Fa voasoratra hoe: Ho voaozona izay rehetra tsy manaraka izay rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna, dia manao azy izy. Fa miharihary fa tsy misy olona marina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny lalàna; satria "ny marina amin'ny finoana no ho velona". Ny lalàna anefa tsy miorina amin'ny finoana, fa: ny olona manao izany dia ho velona amin'izany. (Galatiana 3,10: 12).
"Toy? Ka mifanohitra amin'ny fampanantenan'Andriamanitra ve ny lalàna? Sanatria izany! Fa raha nisy lalàna iray manome fiainana, dia azo antoka fa avy amin'ny lalàna ny fahamarinana » (Galatiana 3,21).
"Very Kristy, ianao izay te hohamarinin'ny lalàna, latsaka tamin'ny fahasoavana ianao" (Galatiana 5,4).
"Fa fahasoavana no hamonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany; fa fanomezan'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa, mba tsy hisy hirehareha" (Efesiana 2,8: 9).
"Ao aminy no hahitana fa tsy ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna, fa ny finoana an'i Kristy, dia ny fahamarinana izay avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana" (Filipiana 3,9).
"Izy no namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny antso masina, tsy araka ny asantsika, fa araka ny toroheviny sy araka ny fahasoavana izay nomena antsika ao amin'i Kristy Jesosy talohan'ny andron'izao tontolo izao" (2 Timoty 1,9).
"Mampifaly antsika Izy - tsy noho ny asa izay nataontsika tamin'ny fahamarinana, fa araka ny famindram-pony, amin'ny alàlan'ny fandroana fanavaozana sy fanavaozana ao amin'ny Fanahy Masina" (Titosy 3,5).